सवारी दुर्घटनामा पाँच वर्षमा १० हजारको मृत्यु ! – Everest Dainik – News from Nepal
सवारी दुर्घटनामा पाँच वर्षमा १० हजारको मृत्यु !
काठमाडौं, असार २३ । सवारी दुर्घटनामा परी पछिल्ला पाँच वर्षमा देशभर १० हजारबढी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष दुई हजार सर्वसाधारणको ज्यान दुर्घटनामै जाने गरेको छ । यो संख्या प्राकृतिक विपत्तिबाट ज्यान गुमाउनेहरूको भन्दा झन्डै दुई गुणा धेरै हो । तथ्यांकअनुसार मुलुकभर प्राकृतिक विपत्तिबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष ९ सय सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी सैलेश थापाले प्राकृतिक विपत्तिभन्दा सवारीसाधन दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दुई गुणा धेरै रहेको बताए । उनले भने, ‘सडक दुर्घटना मानवनिर्मित संयन्त्रबाट हुने हुन् । यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या प्राकृतिक विपत्तिबाट ज्यान गुमाउनेको भन्दा डबल धेरै देखिन्छ । यसो हुनु दुःखद हो ।’
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४ ७५ को वैशाख मसान्तसम्म मुलुकभर सवारी दुर्घटनाका ९ हजार ५० घटना भए । दुर्घटनामा २ हजार ९७ ले ज्यान गुमाए । १० हजार २ सय ३३ घाइते भए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । सांकेतिक तस्वीर
ट्याग्स: Accdent, Bus Accdent, पाँच वर्षमा १० हजारको मृत्यु
बीबीसीका ४५० कर्मचारीको जागिर गुम्यो
टिपरले किचेर मृत्यु, पीडित परिवारले बुझेनन् शव
यू–१९ विश्वकपः वेष्ट इन्डिजलाई हराउँदै न्यूजिल्याण्ड सेमिफाइनलमा
जोफ्राले दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको टी–२० सिरिज गुमाउने
चीनले ४ दिनमै बनायो एक हजार शैय्याको अस्पताल
काठमाडौंमा बंगलादेशी व्यापारीको हत्या
यी ५ क्रिकेटर, आइपीएलमा उत्कृष्ट गरे विश्वकप खेल्ने मौका पाउन सक्छन्
गलत काम गर्ने प्रहरीलाई कारवाही गरिन्छः डिआईजी पोखरेल